Poll - Flat board သို့မဟုတ် Resonance box လား။ - စာမျက်နှာ2- အထွေထွေ - Kalimba ဖိုရမ်
Poll - Flat board ...
ဘယ်အကြိုက်ဆုံးလဲ အဘယ်ကြောင့်? စစ်တမ်းကိုဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်၊
Poll - Flat board သို့မဟုတ် Resonance box လား။
စာမျက်နှာ2/2prev 1 2
Posted: 31/12/2020 1:53 pm တွင်
@greenlarry မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များသည်များပြားလှသောအရာများဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်မိသည်။ တောင်းပန်ပါတယ် ^^ ငါသင်တစ်ခုခုသင်ယူမျှော်လင့်ပါတယ်
ခေါင်းစဉ် starter Posted: 31/12/2020 1:55 pm တွင်
နောက်ဆုံးမှာတော့အသံကိုရွေးချယ်ဖို့အတွက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုသေတ္တာဟာကျွန်ုပ်အတွက်ရွေးချယ်မှုပဲ။ ၎င်းသည်အခြားအသံသွင်းကိရိယာများနှင့်အတူအခန်းတစ်ခန်းတွင်ကြားနိုင်သည့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသောအသံဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် box kalimbas အတွက်အရည်အသွေးအမျိုးမျိုးရှိသည်ဟုပြောသင့်သည်။ ဒီရေသေတ္တာများသည်အဆိုးဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ Kalimbas အားလုံးနီးပါး Hugh Tracey (ငါသည်လည်း Amazon တွင် Gecko နှင့်အလားတူအရည်အသွေးတူရိယာများရှိသည်) ဟုပြောနိုင်သည့်အတွက်ကံကောင်းသည်၊ မျှမျှတတစျေးကြီးသော်လည်းတစ်ပြားလျှင်ရကျိုးနပ်သည်။ လှပသောအာဖရိကသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအာဖရိကတူရိယာတစ်ခု - အာဖရိကတွင်ပြုလုပ်သည်။ သူတို့ကဘယ်သူ့ထက်မကဂိမ်းထဲမှာရောက်နေတယ်၊
ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းတစ်ခုဝယ်ခြင်း၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်တစ်ခုကိုကြိုးစားလုပ်ခြင်း၊ အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်အလောင်းအစားကိုပြားချပ်ချပ်ပြားပေါ်တွင်လောင်းလိမ့်မည်။
Posted: 31/12/2020 7:55 pm တွင်
ငါလုပ်နေတဲ့ Tines တွေအားလုံးကြိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့်ပြားချပ်ချပ်ပြားကိုပိုကြိုက်တယ်။
Posted: 08/01/2021 2:43 pm တွင်
ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အသံအကွက်ပါသည့် Kmise ကိုစမ်းကြည့်ပါမည် (ဒီကိစ္စကိုအမိန့်ပေးလိုက်သည်) ။
Posted: 08/02/2021 4:14 pm တွင်
@pensionerposse စိတ်ဝင်စားစရာ! ဒီအမှတ်တံဆိပ်ကိုမသိပေမယ့်ကြည့်ကောင်းပါတယ်🙂လက်ချောင်းများသည်မြန်ဆန်စွာပေးပို့နိုင်ခြင်း crossed
Posted: 09/02/2021 8:37 pm တွင်
မင်္ဂလာပါ နှင့် Nataliya ကြိုက်ခဲ့
Kmise သည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအရည်အသွေးကောင်းသည့်ဂီတတူရိယာအမျိုးမျိုးကိုပြုလုပ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၌ ၄ င်းတို့၏သွင်ပြင်လက္ခဏာသဟဇာတ ၂ ခုရှိသည်။ ငါ့ ukulele ဖိုရမ်မှသူငယ်ချင်းအချို့ကသူတို့၏ယူကေများသည်ငွေအတွက်တော်တော်ကောင်းသည်ဟုဆိုကြသည်။
(အချို့ကသင်၏ ၀ ယ်ယူမှုများမှကံမကောင်းသောကြောင့်၎င်းသည်သေလွန်သောသူတို့သည်နိူင်သည်။ )
Posted: 09/02/2021 9:33 pm တွင်
အကြှနျုပျ၏ Kmise (ဆွန်း 17 tines) ရုံရောက်ရှိလာသည်, ဖြည် & မှတ်စုများကြိုးစားခဲ့အစွန်းရောက်မှာအတော်လေးအသံမမှန်ကန်တဲ့မှာ, ဒါပေမယ့် (ဒါပေမယ့်အအေးဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်စေခြင်းငှါ, ချက်ချင်းသွားပေးခဲ့ရသည်သော်လည်း ) ။ 😉
Posted: 13/02/2021 2:00 pm တွင်
@pensionerposse ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်ကောင်းမွန်စွာရရှိနိုင်သည် - ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့သောအခါ၎င်းတို့သည်ပဲ့တင်ထပ်နေလျှင်ပင်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာအပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်လို့ထင်ပါတယ် အခန်းအပူချိန်တွင်ခေတ္တအနားယူပြီးနောက်ပြန်လည်ညှိရန်ကြိုးစားပါ - ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်ယင်းတို့ကိုပြုပြင်သည်။
ခေါင်းစဉ် starter Posted: 13/02/2021 4:57 pm တွင်
ငါပြားချပ်ချပ်ဘုတ်များနှင့်ဆွန်း Kalimba ရဲ့အကြောင်းကိုအများကြီးဖတ်ပြီးပြားချပ်ချပ်ဘုတ်ကိုသွား၏။
ငါနင်နင်ကစားနိုင်ပုံကိုသဘောကျတယ်၊ အထူးသဖြင့်မိန်းမကအိပ်နေတုန်းမနက်စောစောလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကြောင့်။ ကျွန်ုပ်အဘိုးက“ အိပ်ပျော်သောမယားတို့ကိုအိပ်ပါစေ” used ပြောသောစကားများ😮
Posted: 25/02/2021 9:23 pm တွင်
GreenLarry နှင့် Nataliya ကြိုက်ခဲ့
@frankv မင်းရဲ့အဘိုးဟာပညာရှိမဖြစ်နိုင်ဘူး - ငါသူ့ကိုပေးရမယ်။
ခေါင်းစဉ် starter Posted: 25/02/2021 10:13 pm တွင်
၎င်းသည်အိမ်လုပ် Kalimba ဖြစ်သည်။
အမေဇုံမှသစ်သီးများမှာယူပြီးသစ်သားသည်ထင်းရှူးပင်ဖြစ်သည်။ ငါသစ်သားတစ်ကောင်ပိုကောင်းတဲ့အသံပေးကြောင်းဝက်ဘ်ပေါ်မှာတွေ့ရှိသောကြောင့်, ငါသပိတ်ပင်ကောင်းတစ် ဦး ကိုမှာယူခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကြီးမားတဲ့အက်ကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်။ သစ်တစ်ခုရောက်လာရန်စောင့်ဆိုင်းခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်အနားတွင်အိပ်နေသောထင်းရှူးသစ်သားကိုယူပြီးလျှင် Kalimba ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သစ်ပင်နှင့်ငှက်များကို pyrography (ကျွန်ုပ်၏အခြားဝါသနာ) တစ်ခုဖြင့်ပုံဖော်ခဲ့ပြီးသစ်သားကိုစွန်းထင်းစေခဲ့သည်။
ငါပြောရမယ်၊ အစပြုသူတွေဆီကိုနားထောင်ရမယ်၊ ပျော့ပျောင်းသောသစ်သားနေသော်လည်း
Posted: 26/02/2021 6:08 pm တွင်
@alpobc ငါအလုပ်လုပ်မယ်လို့မထင်ဘူး ငါကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်ပေမယ့်လွန်းသော Kalimba သည်မြင့်မားသောမှတ်စုများနှင့်အပြင်ပိုင်း tines များနှင့်ပြproblemsနာများရှိသည်ဟုခံစားရသည်။ အထူးသဖြင့်သင်သည်အနားစွန်းနီးကပ်နေပြီ၊ ဆွန်းကွက်သည်ပဲ့တင်ထပ်နေသောအလယ်ဗဟိုတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
မဟုတ်ဘူး၊ ပြင်ပမှတ်စုတွေက မှတ်စုတွေ အများကြီး ပိုမြင့်တာကြောင့် ပဲ့တင်ထပ်မနေကြဘူးလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ မည်သည့်ကိရိယာတွင်မဆို အောက်မှတ်စုများရှိနေသရွေ့ အဆင့်မြင့်မှတ်စုများသည် အသံမမြည်ပါ။
Posted: 30/01/2022 9:24 pm တွင်
ခေါင်းစဉ်များ Tags: ပြားချပ်ပြား (1), ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုသေတ္တာ (1), ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှု (1),